Torohevitra mahitsy 10 hiatrehana ny tsy fahasalamana - Blog
Torohevitra mahitsy 10 hiatrehana ny tsy fahasalamana
Ratsy tarehy ianao.
Notenenin'ny olona maro ianao.
Ary rehefa mijery fitaratra ianao dia tsy afaka ny tsy hanaiky.
Fa raha tena ratsy tarehy ianao, ahoana no hiatrehanao izany zava-misy izany?
Ahoana no hiatrehanao ny tsy mahasarika?
Ny zavatra voalohany aloha…
Jereo / henoy ity lahatsoratra ity:
Ahoana no hiatrehana ilay horonan-tsary maharikoriko
1. Amin'ny fanahin'ny fahamarinana
Andao tsy hiaro tena - na dia ny lafiny hatsarany aza dia misy ifandraisany ihany koa, ary misy zavatra kendrena ihany koa momba izany.
Isika tsirairay avy dia manana fijery manokana izay mety tsy mifanaraka amin'ny tsiron'ny tsirairay, fa raha angataho olona 100 hanombatombana ny hatsaran'ny olona tsirairay amin'ny 10 dia mety hahita isa mitambatra manodidina ny teboka sasany eo amin'ny maridrefy ianao .
Noho izany ny olona iray dia mety mitifitra na aiza na aiza eo anelanelan'ny 4 sy 7, fa ny ankamaroan'ny naoty dia mety ho 5 na 6.
Angamba mahazo isa eo anelanelan'ny 1 sy 4 ianao amin'ny isa ananan'ny maro an'isa anao ho 2 na 3.
Andao tsy hikapoka manodidina ny roimemy. Eo amin'ny faran'ny ambaratonga tsy dia manintona ianao.
Ary mety halanao izany rehefa manandrana mandresy lahatra anao ny olona raha tsy izany.
ny fomba hiatrehana ny mpirehareha
Milaza zavatra toy ny, 'Tsara amin'ny fombanao manokana ianao' na ' Miavaka ianao. '
Ny hany henonao amin'ireo clichés ireo dia ny tsy fihatsarambelatsihy miseho ho fahalalam-pomba.
Mamelà ny helony, fa tsy fantany izay lazainy. Aleo atrehana izany, fa tsy mora ny milaza amin'ny olona iray fa tsy mahasarika izy ireo…
Raha tsy hoe mahalala olona sy ny mety ho setrin'izy ireo ianao, dia ara-dalàna ny mitandrina.
Fa andao horaisintsika amin'ny lanjan'ny tarehy izany, raha azafady ny punoka, ary ekeo fa ianao dia olona somary ratsy tarehy eo amboniny.
Ny fanontanianao voalohany dia mety…
2. Fa maninona aho no maharikoriko?
Halako ny hamaky azy aminao, fa angamba tsy nahita vintana tsara ianao tamin'ny tsatokazo génétique raha ny amin'ny bika aman'endrinao.
Ny fijerinao ny tena toetranao dia tonga amin'ny hoe iza ny ray aman-dreninao. Ny ray aman-dreny tsy dia manintona fironana dia manana zanaka tsy dia manintona firy.
Ny tsipika ny valanoranonao, ny oronao, ny masonao, ary ny lanjanao aza dia voataonan'ireo fototarazo nampitaina taminao.
Amin'ny lafiny tsara, mandray andraikitra be dia be amin'ny soroka ity. Tsy fahadisoanao ny fijerinao ny endrika ivelany.
mitia olona ary tia olona
Mazava ho azy, ny antony ara-tontolo iainana toy ny sakafonao sy ny safidinao amin'ny fomba fiaina dia mety hanana anjara toerana ihany koa, ary koa ny zava-mitranga amin'ny fiainanao hatreto.
Fa ny bika aman'endrinao no miankina amin'ny fototarazonao.
Izay no antony mahatonga ny ampahany mahasosotra anao hiatrika ny haratsianao dia ny…
3. Ekeo fa mahantra ianao
Ary tsy izany fotsiny ny milaza fa mahatakatra lojika ianao fa tsy mahasarika.
Ny fanekena dia midika hoe tsy manana lolom-po na hatezerana na tsy fahatokisan-tena intsony amin'ny bika aman'endrinao.
Midika izany fa mihavana amin'ny hoe ratsy toetra noho ny ankamaroan'ny olona ianao.
Tsy mora izany, fa azo atao.
Toy ny amin'ny endrika fanekena rehetra, ny lakileny dia ny fahafantarana fa tsy manam-pahefana firy ianao amin'ny toe-javatra misy, ankoatry ny tena mety hisian'ny fandidiana kosmetika (na dia tsy azo atao na irina foana aza izany).
Mazava ho azy, azonao atao ny manandrana manararaotra ny toe-javatra iainanao ary misafidy akanjo, taovolo ary makiazy mifanentana indrindra aminao…
.. Fa misy fetrany ny hahasarika anao kokoa noho ireo.
Ary raha ny tsy fitiavanao mahasarika dia vokatry ny safidinao fomba fiaina iray dia azo resahina izany.
Amin'ny ankapobeny, na izany aza, tsy maintsy hanaiky ny fijerinao eto sy izao ianao.
Na dia mety manampy kely fotsiny aza izany dia mety mila mampatsiahy ianao fa…
4. Na dia ny olona manintona aza dia mahatsapa maharikoriko
Ny fanekena ny fijerin'ny olona dia tsy ho an'ny olona toa anao izay mahalala fa ratsy tarehy ihany izy ireo.
Hita fa tena mahazatra ny tsy fandriam-pahalemana momba ny endrikay.
Ary na dia mety hiteny aza ianao fa misy olona manao salanisa isa 5 na 6 amin'ny 10 dia tsy mahalala na inona na inona momba ny faharatsiana, tsy mampihena ny hatezerana mety ho tsapan'izy ireo izany.
Ny endrik'olona (ampahany amin'ny malalany tena hevitra ) tsy hifanaraka amin'ny zava-misy foana. Noho izany dia tsy fahita firy ho an'ireo 6 mieritreritra fa izy ireo dia 2. Na ny 8 hieritreritra hoe 4 izy ireo.
Raha ny marina dia maro ny olona no tsy manome lanja ny tanjon'ny hatsaran-tarehiny.
Ka ireo izay manintona kokoa dia tsy voatery hanana izany mora kokoa ao amin'ny sampana psikolojia.
Azo antoka fa mety hihevitra azy ireo ho manintona kokoa noho ny anao ny olon-kafa, saingy mety hijaly toa anao ao anaty ihany izy ireo.
Raha ny tena izy, raha tsy mitovy amin'ny fahitan'ny hafa azy ny fomba fahitany ny tenany dia mety ho sarotra aminy tokoa ny hanaiky izany.
Raha fantatrao fa tsy mahasarika saina ianao, dia mety ho voafehinao tsara kokoa noho izy ireo.
Ataovy ao an-tsaina izany ary…
5. Aza mialona na mitsiriritra olona mahasarika kokoa
Mora ny mijery ny masonao ivelany tsara tarehy kokoa ary mahatsapa fialonana sy fialonana mitazona anao.
Toa manana ny vintana rehetra fotsiny izy ireo, sa tsy izany?
Koa satria mitsara ny olona amin'ny bika isika raha vao mifanena aminy , mety ho ara-dalàna raha toa ka manintona anao kokoa ny olona iray, dia mety hisy olona mieritreritra zavatra tsara momba anao.
Saingy mihoatra ny didim-pitsarana faingana, ny fijerintsika dia mety hitondra antsika hatreto. Mety hanampy anay hampiditra ny tongotray eo am-baravarana izy ireo, saingy tsy afaka mitazona anao ao amin'ny efitrano izy ireo.
Ny toetra amam-panahy no tena itehirizan'ny olona ary mety tiany na tsy tiany.
Ary amin'ity lafiny ity, tsy dia iharan-doza ianao.
Misy olona manintona izay mahatsiravina rehefa mahafantatra azy ianao ary misy olona ratsy tarehy izay manintona ary olona.
Raha mijery amin'ny fitsiriritana mandrakizay ireo mety ho ambony noho ianao ao amin'ny departemanta miseho ianao, dia tsy ho afaka hanaiky ny tenanao mihitsy amin'ny tena toetranao mihitsy.
Tsy afaka mankafy sy manaja ny tenanao ianao mandritra ny fotoana irariana mba ho olon-kafa.
Tena ilaina ihany koa izany raha ny…
Toetra 6 an'ny olona manintona tokoa
Ahoana ny fomba ahazoana aina amin'ny hoditrao
Lazao ireo fanamafisana 6 tsara isan'andro mba hananganana tena sy fahatokisan-tena
8 Antony Fanatsarana ny fanantenana Raha miahiahy ianao dia tsy hahita fitiavana mihitsy
Fa maninona no halako be ny tenako? Ahoana no hialako amin'ireo fihetseham-po ireo?
Famantarana 20 tsy manaja tena (sy ny fomba fijanonanao)
6. Fifandraisana ho an'ny olona ratsy tarehy
Sarotra kokoa amin'ny olona ratsy tarehy ve ny mampiaraka?
Mety, na dia olona maro amin'ny ambaratonga rehetra manintona aza no miady amin'ny fiarahana sy ny fifandraisana.
Averina indray, tokony hiezaka ny tsy hahita ny bika aman'endrinao ho sakana amin'ny sambatra ianao fifandraisana salama .
Ka ahoana no hiatrehanao ny maha-ratsy tarehy sy mampiaraka?
Tokony hitantana ny zavatra antenainao ianao ary hampahatsiahy ny tenanao fa ny fijery dia tsy ny zava-drehetra ao amin'ny mpiara-miasa.
Raha atao teny hafa, dia mety ho mikendry ny mampiaraka amin'ny olona iray izay mipetraka eo amin'ny faran'ny ambany ihany koa ianao.
Tsy faharesena izany. Zava-misy izany.
Izany no mitranga fa ny ankamaroan'ny olona dia mirona any amin'ny fifandraisana amin'ny olona iray izay manana haavo mahasarika mitovy.
Ka ny 6 dia mety hiafara amin'ny 5 na 7. Mety hisy daty 8 manomboka amin'ny 7 sy 10.
Raha toa ianao ka 2 na 3 no kendrenao, dia tsara kokoa angamba ny mitady vady izay 2, na 3, na 4 koa.
Anontanio izay rehetra nanana fifandraisana marin-toerana sy nanolo-tena nandritra ny taona maro izay zava-dehibe indrindra amin'ny mpiara-miasa ary tsy ho ny endrik'izy ireo izany 100% izany.
Ny toetrany, ny fahafinaretanao miaraka aminy, ny zavatra tsara ataon'izy ireo, ny fanampiana omeny anao.
Raha manahy ianao fa tsy ho hitanao manintona azy ireo ara-batana na ara-nofo dia tadidio fa ireo zavatra ireo dia mitombo rehefa mahafantatra olona iray ianao.
Ka na dia mety mijery olona iray amin'ny daty voalohany aza ianao ary manome sento kely ary maniry ny hijeren'izy ireo tsara kokoa, dia aza manilika azy ireo avy hatrany ho manana pototra zero ho mpiara-miasa.
Rehefa dinihina tokoa, dia tianao ho olon-kafa ny hijery ny bika aman'endrinao ary hanome fotoana anao koa, sa tsy izany?
Ny fitiavanao azy ireo dia afaka mitombo toy ny nahasarika anao koa.
Ary mampiaraka amin'ireo izay mitovy endrika tsy mahasarika anao afaka mahazo tombony hafa…
Izy io dia afaka manala ny fahatsiarovan-tena mety ho hitanao manodidina ny bika aman'endrinao.
Ny tsindry handresena ny bika aman'endrinao amin'ny alàlan'ny famolavolana sarin'ny fahatokisan-tena sy fahasambarana dia mihena satria samy manaiky ianao fa ny fijery dia mety tsy ho ny antony manosika raha mandroso amin'ny daty bebe kokoa ilay daty.
Afaka mahatsapa fiadanam-po bebe kokoa ianao ary mamela ny tena toetranao marina sy tena hiseho fa tsy mahatsapa ny filàna 'manonitra' ny haratsianao ianao amin'ny alàlan'ny mody miseho ho zavatra tsy ianao.
Iray ihany ny antony tokony hanaovanao…
7. Aza mifantoka amin'ny bika aman'endrinao
Azo antoka fa mora kokoa ny milaza azy noho ny vita, indrindra raha mino ianao fa tena tsy dia manintona noho ny ankamaroan'ny tena.
karazana alika inona no atao hoe clifford
Saingy rehefa mieritreritra ny mahamenatra anao ianao dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny haavon'ny fahafaham-ponao amin'ny fiainana.
Izany dia vokatry ny zavatra antsoina hoe ny fiheverana diso .
Amin'ny ankapobeny, amin'ny fieritreretana faritra iray amin'ny fiainanao izay tsy dia mahafaly anao loatra, dia mandoto ny finoana ankapobeny anananao momba ny tsara sy ny ratsy amin'ny fiainanao ianao.
Izany dia naseho tamin'ny fianarana tsy manam-paharoa izay nanontany ny olona momba ny fanontaniana momba ny fahafaham-po amin'ny fiainana sy ny fahafaham-po amin'ny vatana.
Ny iray antsasany dia nomena ny fangataham-panontaniana momba ny fahafaham-po amin'ny vatana voalohany ary ny iray kosa namaly ny fanontaniana momba ny fahafaham-po amin'ny fiainana aloha.
Ireo nanontaniana voalohany momba ny fahafaham-pony amin'ny vatany dia naneho fahasamihafana lehibe kokoa amin'ny fahafaham-po amin'ny fiainana.
Midika izany fa raha afa-po tamin'ny fisehoany ivelany ny mpandray anjara iray, dia azo inoana kokoa fa nitatitra fahafaham-po avo lenta tamin'ny fiainany izy ireo.
Fa raha tsy afa-po amin'ny fisehoany ivelany ny mpandray anjara iray dia nanome tombana ratsy kokoa izy ireo raha ny fahafaham-po amin'ny fiainany no jerena.
Raha tsorina izany, raha tsy tianao ny bika aman'endrikao, ny fieritreretana izany dia mety hametraka tena ambany amin'ny fahatsapanao amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeny.
Etsy ankilany, raha mieritreritra zavatra tianao momba ny tenanao na amin'ny fiainanao ianao, dia mety hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeny.
Na mafy toy inona aza ianao, raha sendra mieritreritra ny bika aman'endrinao ianao, dia miezaha hanakorontana ireo eritreritra ireo ary mamindra ny sainao amin'ny zavatra hafa.
Arakaraky ny tsy ahafahanao mieritreritra ny maharatsy anao no mahakivy anao ary arakaraka ny maha positive anao ny fiainanao manontolo.
Raha ny marina, raha afaka mampihatra fankasitrahana isan'andro ianao ary mieritreritra ny zavatra sasany izay tena ankasitrahanao dia afaka manampy anao hitazona fomba fijery tsara kokoa amin'ny fiainana izany.
Raha miresaka fomba fijery, raha tanora sy ratsy tarehy ianao, dia mendrika ny handinihana ny mety…
8. Mety ho dingana iray ny tsy fahasalamana
Ity fizarana ity dia natao indrindra ho an'ireo mpamaky izay tanora ary mety mbola miova haingana ny vatany sy ny tarehiny.
Marina fa mandritra ny fahatanorana sy ny fahatanoran'ny fahatanorana dia afaka miaina olana marobe momba ny endrika ivelany misy antsika isika.
Miaraka amin'ny hormonina mivezivezy amin'ny vatantsika, mety manana hoditra ratsy isika, mony, fitomboan'ny fitomboana, miova ny lanjany, ny fivoaran'ny vatana aloha na tara…
… Raha tsy hiteny afa-tsy ireo endrika hita maso izay mbola mahita ny toerany marina.
Ary ireo hormonina ireo ihany dia afaka mitondra ny toetrantsika avy any ambony ka hatrany ambany ao anatin'ny indray mipi-maso. Izany dia mety hahatonga antsika hahatsapa ho ratsy noho ny bika aman'endrintsika noho ny mety ho fanaontsika.
Amin'izao vanim-potoana iainana izao dia zava-dehibe ny mahatadidy fa ny zavatra hitanao eo amin'ny fitaratra ankehitriny dia mety tsy ny fiafaran'ny raharaha.
Mety handalo ilay antsoin'ny olona am-pitiavana hoe dingana ‘gana gana’ ianao ary mety hitombo ho manintona anao kokoa izao.
Heck, jereo fotsiny ny sasany amin'ireto ohatra ireto ny olona izay tonga tamin'ity dingana ity.
Ka na dia momba ny fanaovana ny marina aza ity lahatsoratra ity ary milaza azy toa azy, dia mbola azonao atao ihany ny manaiky ny bika aman'endrinao ankehitriny nefa tsy ekenao fa toy izao no ho fijerinao rehefa tonga olon-dehibe tanteraka ianao.
Ary raha mihalehibe tsy manintona kokoa noho ny namanao ianao dia mety tadidinao fa misy…
9. Misy tombony azo amin'ny hoe ratsy tarehy
Mety hieritreritra ianao fa noho ianao ratsy tarehy, dia nahazo tanana ratsy teo amin'ny fiainana…
… Saingy misy fisondrotana vitsivitsy ho iray amin'ireo olona tsy dia manintona indrindra eto an-tany.
1. Ny zavatra antitra dia tsy zavatra mampatahotra anao loatra. Toa manjavona rehefa mandeha ny fotoana, fa ny anao angamba tsy hiova firy toy ny ankamaroany. Ary raha ampitahaina amin'ny hafa, mety hahazo toerana kely amin'ny tsatokazo hatsaran-tarehy mihitsy aza ianao.
2. Tsy misy olona mieritreritra ho tonga amin'ny endrika ivelanyo. Fantatr'izy ireo tsara fa manana momba anao bebe kokoa ianao raha nahavita nahomby tamin'ny fiainana.
3. Ny olona toa anao amin'ny maha-izy anao, fa tsy amin'ny endrikao. Ity dia tsy maintsy milaza zavatra mahafinaritra momba ny toetranao (mieritreritra izy ireo fa tsy manaraka ny volanao!)
4. Tsy mila manenjika ny lamaody farany ianao. Ny marika lehibe sy ny fironana farany lafo indrindra eto an-tany dia tsy mendrika hanakorontanana fotsiny. Afaka mividy akanjo tsapanao fa mahazo aina ianao.
5. Tsy mila mandany taona ianao maka ny selfie tonga lafatra amin'ny Instagram.
6. Raha vehivavy ianao, ny vehivavy hafa dia tsy mahita anao ho loza mitatao amin'ny fahatokisan-tenany na ny fifandraisany ka mety hihatsara kokoa aminao.
7. Matetika no atao ambanin-javatra ny olona ratsy tarehy. Ka rehefa asehonao ny habetsaky ny talenta anananao dia azonao atao ny mankafy ny endrika fahagagana amin'ny endrik'olona. Misalasala? Mazava fa tsy naheno ianao Susan Boyle .
tsy mieritreritra aho fa olombelona tanteraka
8. Tsy ianao marivo . Afaka mijery mihoatra ny fisehoan'ny olon-kafa ianao. Tsy raharahanao raha misy olona ratsy tarehy, omenao fotoana mitovy amin'ny olon-drehetra izy ireo.
9. Raha ianao introvert , tsy maintsy miatrika fifandraisana ara-tsosialy tsy misy dikany sy resaka kely ianao.
10. Ny sainao no fitaovana matanjaka indrindra aminao
Ny zava-misy dia, na dia lalina ny hoditrao aza, dia mety hisy vokany eo aminao izany.
Ary, eny, ny fahafinaretana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fiainanao sy ny fomba itondran'ny hafa anao.
Fa ny fomba tsara indrindra hiatrehana izany dia ny fanovana ny fomba fisainanao azy.
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny fieritreretana ny bika aman'endrinao amin'ny fomba ratsy dia mety hahatonga anao tsy hanana lafy tsara ny fiainanao manontolo.
Na izany aza, raha azonao atao ny manaiky ny bika aman'endrinao sy ny mahita ny lafy tsara mety hitondrany azy, dia mety hanatsara ny fomba fijerinao izany.
inona no hatao rehefa tena mankaleo ao an-trano ianao
ny fomba hamerenana ny fanambadianao
inona no hatao rehefa tena leo
debut enzo sy cass
ahoana no hananana fiainana vaovao